Dhammaan bahwynta soomaaliyeed guud ahaan, gaar ahaana inta jecel barashada cilmiga safriga, waxaa loogu bishaareeynayaa inuu soo baxay Kitaab aad loogu diirsaday loogana faa,iidaystay oo magaciisa la yiraahdo: Al-IIDAAX FII- CILMI-TASRIIF. Kitaabka waxaa qoray aqoonyahan Soomaaliyeed oo magaciisa la yiraahdo: Shiikh. Maxamuud Shiikh. Xanbali Xaaji C/Suldaan. Kitaabka waxaa daabacday Daarul-fikri Al-carabi. Waxayna ku daabacday joowdada wax lagu daabaco midda ugu qiimaha badan.
Kitaabka wuxuu sheekhu u qoray qaab aad u fudud oo casri ah, qabkaasoo ay la jaanqaaadi karaan cid walba oo doonaysa inay sarfiga barato. (Dhalin iyo dhalinyaro, caamiyo wax garad, cirooliyo curdanba).Intaa waxaa kuu dheere: Kitaabta waxaa si heer sare ah afsoomaali ugu sharxay Sh. C/llaahi Sh. Xanbali, oo maqal iyo muuqaalba ugu duubay masjidka Iqra ee ku yaala magaalada Odense ee wadanka Denmark.
Haddaba Bahda shabakada Halgan.net, waxay sidii looga bartay jeceshahay inay bulshadeeda la wadaagto inay si taxana ah ugu soo gudbiso kitaabkaas qiimaha badan. Kitaabku waa 25 xisadood oo maqal iyo muuqaal ah. Mu,alifka kitaabka iyo Daarul Faaruuq, ayaa waxaa ay shabakadda Halgan.net ku wargaliyeen inay aad ugu howlan yihiin sidii kitaabkaa loo gaadhsiin lahaa dhammaan dugsiyada iyo macaa-hidda wadanka Soomaaliya.
Wixii Faah-faahin ah ee intaa dheer waxaad kala xiriiri kartaa: